Zinqume ukuyokipita izelamani ezizalisene | News24
Durban - Usababaza ihlazo umndeni wezelamani zaseMagabheni, eningizimu yeTheku ezisolwa ngokumithisana kanti kuthiwa sezize zashiya ikhaya zayokipita, kubika iphephandaba ILANGA.
Lolu daba kuthiwa lufihliwe kule ndawo njengoba kuthiwa lezi zelamani - esesilisa sineminyaka engama-27 esesifazane ingama-21 - ILANGA elinawo amagama azo, sezikhethe ukushiya ikhaya ziyokipita ngoba zingayizwa eyokwehlukana.
Lolu daba luke lwadingidwa komunye wemisakazo yomphakathi lapho uninalume walezi zelamani ebegeqa amagula ekhuluma ngenkinga umndeni obhekene nayo njengona kuthiwa kazizwa lezi zelamani noma zitshelwa ukuthi ezikwenzayo kuyihlazo emphakathini futhi kakwamukelekile.
ILANGA likhulume naye uninalume - ongeke adalulwe ukuvikela umndeni njengoba sekukhona nengane - okuqinisekisile ukuthi umndeni ubhekene nale nkinga yabashana bakhe asebenomntwana ndawonye.
Uthi abashana bakhe bebehlala nonina wabo okunguyena obakhulisile kwazise uyise ushone besabancane.
Uthi inkinga iqale ngesikhathi bebona ushintsho entombazaneni, okugcine kuvelile ukuthi izithwele.
"Bekuthi uma udadewethu embuza ukuthi ukhuleliswe ngubani, angafuni ukusho ukuthi ngubani uyise wengane. Kuthe ekuhambeni kwesikhathi, udadewabo omncane watshela unina ukuthi uke amubone udadewabo omdala ebusuku eyolala embhedeni womfowabo. Sibe sesibahlalisa phansi babuzwa ukuthi kuqhubekani phakathi kwabo, yilapho bevume khona ukuthi ingane ngeyabo. Lokhu kusithusile siwumndeni batshelwa ukuba bayiyeke le nto ngoba iyihlazo futhi kayikaze yenzeka nje emndenini," kusho yena.
Uthi kunokuba bayeke, lona wesilisa uvele wakhetha ukuphuma ekhaya wayoqasha khona endaweni.
OLUNYE UDABA: Kawumenywanga umndeni ekhumula inzilo umkaNcwane
"Uthe uma ehamba umfana, nodadewabo wasitshela ukuthi ngeke asale ekubeni uyise wengane yakhe ehamba. Udadewethu lumuphethe kabi kakhulu lolu daba ngoba yizingane zakhe lezi," kusho yena.
Ebuzwa ukuthi lolu daba seluyaziwa yini emphakathini, uthe akanaso isiqiniseko kodwa bakhona abantu abasolayo ngenxa yokusondelana kwabashana bakhe ngendlela engajwayelekile.
Imizamo yokuthola lezi zelamani nonina, kayiphumelelanga njengoba uninalume ebethembise ukuxhumanisa leli phephandaba nabo.
Eseshayelwa ucingo ngesikhathi abethe makathintwe ngaso, bese luvaliwe engasayiphenduli nemiqhafazo abethunyelelwe yona kanti kuze kwashaya isikhathi sokuloba ucingo luvaliwe.
Isazi kwezamasiko, uDkt Velaphi "VVO" Mkhize, sithi uma kwenzeke into efana nalena kusuke kumele umndeni uye emsamo uyokhuluma khona ngaphandle kokushisa impepho.
"Uma beya emsamo akufanele bashise impepho futhi bangayi nesilwane khona kodwa kumele baziyele nje bakhulume bashweleze kwabadala, bacele nokuthi uma kuwumkhokha lona mawuvalwe. Uma sebeqedile ukukhuluma emsamo, kumele bathathe imbuzi bayihlabe bese kukhishwa umswani negazi kugezwe lezi zingane kuphinde kuchelwe nasebaleni, kucelwe ukuba lo mkhokha uvalwe," kusho uDkt Mkhize.